Fanatanjahan-tena filaharana isa maimaim-poana miaraka amin'ny matematika filaharana isa
Filaharana isa fanta-daza amin'ny matematika
Fitsapana fandraisana mpiasa maro sy fitsapana fahaiza-manao no tafiditra amin'ny famahana ny filaharan'ny isa. Omena filaharana isa ianao ary tokony ho afaka hanome anarana ny laharana lojika manaraka.
Fanatanjahantena filaharana isa maimaim-poana
Ny laharan-tarehimarika dia azo atao amin'ny alàlan'ny asa aritmetika rehetra. Zava-dehibe tokoa ny fanekena lamina ao ambadik'ireo isa nomena.
Filaharana isa - Sarin'i Gerd Altmann ao amin'ny Pixabay
Amin'ny ankapobeny, ny fitsapana ny fahaizanao misaina lojika.
Amin'ireo fanazaran-tena nofidinay, fanahy iniana izahay tsy nifantoka tamin'ny fampisehoana aminareo ny filaharan'ny isa izay sarotra araka izay azo atao. Araka ny teny filamatra "ny mpitsidika vitsy kokoa dia afaka mamaha ireo laharan-tarehimarika ireo, arakaraka ny maha-maranitra antsika no asongadinay". Tianay fotsiny ny hanome topy maso voalohany momba ireo karazana filaharan'ny isa mety ho sendra anao amin'ny fitsapana aptitude:
Vahaolana amin'ny filaharana isa
Raha mikatona ianao na te-hijery ny valiny dia ho hitanao eto ny vahaolana amin'ireo fanazaran-tena etsy ambony, fa andramo mba ataovy tsara aloha ny tenanao. Amin'ny fitsapana aptitude dia tsy hahita fanampiana amin'ny vahaolana ianao:
Ary raha tsy ampy ny vahaolana, izay milamina tsara, ireto ny vahaolana miaraka amin'ny lalan'ny vahaolana tsirairay avy:
b) 13 isa hafa rehetra +1
c) 52 mifandimby +2, ⋅ 2
d) 18 isa hafa rehetra +1, 20 dia mijanona tsy miova
f) 32 mifandimby +10, mihena 5
g) 8 ny isa tsirairay dia ny fitambaran'ireo tarehimarika roa teo aloha, fantatra amin'ny hoe filaharana Fibonacci
h) 17 Laharana voalohany
i) 29 Feh. 4, +6 ,: 2, ...
j) 65 mifandimby: 2, +20
Mba hamaritana azy dia ireto misy laharana matematika fanta-daza vitsivitsy. Etsy andaniny, ny fahalalana ny terminology sy amin'ny lafiny iray hafa, satria afaka mamaha mora kokoa ireo filaharan'ny isa ireo ianao raha fantatrao mivantana:
Isa voajanahary: 1, 2, 3, 4, 5 manaraka 6
Na ny isa aza: 2, 4, 6, 8, 10 manaraka 12
Isa hafahafa: 1, 3, 5, 7, 9 manaraka 11
Nomery voalohany: 2, 3, 5, 7, 11,13, 17 isa manaraka: 1 (ny isa dia azo zaraina amin'ny XNUMX ihany ary ny tenanao)
Isa isa: 1, 4, 9, 16, 25 isa manaraka 36 (1 ⋅ 1 = 1, 2 ⋅ 2 = 4, 3 ⋅ 3 = 9 sns)
Isa isa: 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 manaraka 29 (ny habaka eo anelanelan'ny isa dia miakatra 1 isaky ny mandeha)
Filaharana Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 isa manaraka: 21 (efa tafiditra ho olana etsy ambony
Isa telozoro: 1, 3, 6, 10, 15, 21 isa manaraka 28 (ny isan'ny tena isa sy ny toerany miaraka amin'ireo ambiny 1. Ny valiny faha-6 dia manaraka izao: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) + 6 = 21
Faculties: 1, 2, 6, 24, 120,720, laharana manaraka: 5.040 (toy ireo isa telozoro ihany, miaraka amin'ny fampitomboana. Ny valiny faha-6 dia manaraka izao: (1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5) ⋅ 6 = 720
Fanatanjahan-tena amin'ny matematika amin'ny sekoly ambaratonga voalohany maimaim-poana
Modely ho an'ny reniranon'ny tanàna maimaim-poana
Fampidinana maimaimpoana ny voromailala
Sudoku afaka manonta
Sary miloko maimaim-poana
Ankamantatra - Olana sivy teboka